ဝါးရောင်းငှက်ခေါင်းဖြူ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝါယောင်းငှက်ခေါင်းဖြူ (Garrulax leucolophus) သည် စာကလေးမျိုးနွယ်ဝင်ငှက်ဖြစ်ပြီး ဟိမဝန္တာနှင့် အရှေ့တောင်အာရှတွင် တွေ့ရှိရလေ့ရှိသည်။ ဝါးရောင်းငှက်ခေါင်းဖြူ၏ အရွယ်မှာ အလျား ၁၂ လက်မဖြစ်သည်။ ထိုငှက်ကို တောင်ခြေရင်းရှိ သစ်တောများတွင် အအုပ်လိုက် အသင်းလိုက် များသောအားဖြင့် တွေ့ရသည်။
ဝါးရောင်းငှက်ခေါင်းဖြူသည် အလွန်ဆူညံစွာ အော်မြည်တတ်သည်။ တစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင် သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် ကျယ်လောင်စူးရှစွာ အော်တတ်လေသည်။ တစ်ကောင်က အသံတစ်မျိုးဖြင့်အော်၍ အခြားတစ်ကောင်က အခြားအသံမျိုးဖြင့် အော်မြည်နေသည်မှာ စည်းကျဝါးကျ အော်နေသည်နှင့်တူလေသည်။
ဝါရောင်းငှက်ခေါင်းဖြူသည် ကျွန်းတောများတွင် အတွေ့ရအများဆုံးဖြစ်သည်။ သစ်ပင်ထူထပ်စွာ ပေါက်ရောက်၍ အရိပ်ကောင်းသည့် သစ်တောများ၊ အထူးသဖြင့် ဝါးရုံတောများတွင် ကျက်စားရန် နှစ်သက်ဟန်ရှိသည်။ ဝါးရောင်းငှက်ခေါင်းဖြူ၏ အရောင်အဆင်း၊ အလေ့အထနှင့် အော်မြည်သံတို့မှာ မှတ်သားစရာကောင်းသည်။ ဝါးရောင်းငှက်ဖြူသည် ကောင်ရေအနည်းငယ်ပါသည့် အအုပ်အသင်းဖွဲ့၍ဖြစ်စေ၊ ကောင်ရေများစွာပါဝင်သည့် အအုပ်အသင်းဖွဲ့၍ဖြစ်စေ ချုံတောများတွင် ပျံသန်းသွားလာ ကျက်စားတတ်သည်။ ဤငှက်မျိုးရှိရာ သစ်တောတွင် ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းမရှိဘဲ လှုပ်လှုပ်ရွရွနှင့် ဆူညံလျက်ရှိသည်။
ဦးခေါင်းဖြူပြီးလျှင် အနီရောင်သန်းနေသည့် အညိုရောင် ကိုယ်ထည်ရှိသော ဝါးရောင်းငှက်ခေါင်းဖြူသည် ဝါးရုံကိုင်း တစ်ကိုင်းနှင့်တစ်ကိုင်းကြားမှ၊ သို့မဟုတ် မြေပေါ်တွင် ပေါက်ရောက်သည့် အပင်ကလေးများကြားမှ ရုတ်ခြည်းထပျံသွားတတ်သည်။ အကိုင်းကြိုအကိုင်းကြားတို့တွင် ကွဲအက်သည့် အသံ၊ အရာဝတ္ထုအချင်းချင်း ပွတ်ကြိတ်သံ၊ ညည်းသံ စသည့် ဝါးရောင်း ငှက်ခေါင်းဖြူ၏ အော်သံတစ်မျိုးမျိုးကို ကြားရတတ်သည်။ ထိုငှက်အုပ်အနီးသို့ လူချဉ်းကပ်သွာလျှင် ငှက်များသည် ရုတ်ခြည်းထပျံသွားတတ်ကြလေသည်။ ယင်းသို့ ပျံသန်းကြရာတွင် အတောင်ရိုက်ခတ်သည့်အသံ သို့မဟုတ် လေထဲသို့ တိုးဝင်သွားသည့် အသံကိုကြားရ၏။ ထိုသို့ ပျံသန်းပြီးလျှင် ဝါးရောင်းငှက်ခေါင်းဖြူသည် ဆူညံခြင်းမရှိတော့ဘဲ တိတ်ဆိတ် လျက်နေတတ်သည်။ သို့သော် တစ်ခဏမျှသာကြာပြီးလျှင် တိုတောင်း၍ တိမ်သည့်အော်သံကို ကြားရပြန်သည်။ ထို့နောက် ကတော်သံကို သံပြိုင်ကြားရပြန်သည်မှာ အသံ၏ ထုထည်ကြီးများမှုနှင့် အသံပြင်းထန်မှုတို့ကြောင့် အသံကြားရသူများအဖို့ ထိတ်လန့်ဖွယ်ပင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့ အော်မြည်ပြီးလျှင် တစ်ဖန် တိတ်ဆိတ်သွားကြပြန်သည်။ နောက်မကြာမီပင် ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း ဆူညံလာပြန်သည်။ ထိုသို့ ဆူညံနေသည့်နေရာသို့ လူချဉ်းကပ်သွားလျှင် ငှက်တို့သည် ပျံသွားကြသဖြင့် ထိုအသံမှာ တောနက်ကြီးတွင် ကွယ်ပျောက်သွားလေသည်။
တနင်္သာရီနယ်မှအပ အခြားသောဒေသများတွင် ဝါးရောင်းငှက်ခေါင်းဖြူ၏ သားပေါက်ချိန်မှာ မတ်လကုန်မှ မေလအထိဖြစ်သည်။ ဩဂုတ်လ အစဦးလောက်တွင် ဒုတိယအကြိမ် သားပေါက်သည်။ တနင်္သာရီနယ်တွင် ဝါးရောင်းငှက်ခေါင်းဖြူ၏ ဥများကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင်တွေ့ရသည်။ အသိုက်များကို များသောအားဖြင့် ချုံတောများတွင် လုပ်ထားတတ်သည်။ အသိုက်ပုံသဏ္ဌာန်မှာ စောက်တိမ်သော ခွက်ပြန့်နှင့်တူသည်။ အသိုက်ကို များသောအားဖြင့် မြက်ပင်နှင့် ဝါးရွက်တို့ကို လျော့ရိလျော့ရဲ လုံးထွေးပြီးလျှင် ပင်စည်ငယ်တွင် နွယ်နှာမောင်းတို့ဖြင့် ချည်နှောင်၍ လုပ်ထားတတ်သည်။ တစ်မြုံလျှင် ဥသုံးလုံးမှ ငါးလုံးအထိရှိသည်။ ဥနှစ်လုံး သို့မဟုတ် ခြောက်လုံးကိုကား တွေ့ရခဲသည်။ ဥ၏အရောင်မှာ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူဖြစ်သည်။ ဝါးရောင်းငှက်ခေါင်းဖြူကို အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် တွေ့ရသည်။ အနောက်ဘက်တွင် ဆင်းမလားမြို့အထိ တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ သစ်တောများတွင် အမြဲကျက်စားသော ငှက်မျိုးဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် ပေ ၇,ဝဝဝ မြင့်သည့် နေရာဒေသများ၌ပင် တွေ့ရသော်လည်း သာမန်အားဖြင့်မူ ပေ ၄,ဝဝဝ ထက်မြင့်သည့် နေရာများတွင် ထိုငှက်ကို တွေ့ရလေ့မရှိချေ။
↑ BirdLife International (2013). "Garrulax leucolophus". IUCN Red List of Threatened Species 2013. IUCN. old-form url
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝါးရောင်းငှက်ခေါင်းဖြူ&oldid=718864" မှ ရယူရန်
ဟိမဝန္တာတွင် တွေ့ရှိရသော ငှက်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။